Hevitra MPANOHARIANA | Kolontsaina
Fanabeazana fototry ny firenena: Ny ohatra frantsay!
2016-09-09 @ 18:34 in Kolontsaina
Indray mandeha, rehefa namakivaky soratra teny ho eny, tsipalotra tamin'ny hevitr'olona iray fa ny lisea (frantsay) no fototry ny fijoroana maha-firenena azy. vantany vao namaky izay soratra sy fanehoan-kevitra izay aho dia nilaza tao an-tsaiko tao hoe: "akaitò fa tena mitovy hevitra aminy aho". Ny tanora no hoavin'ny firenena ary ny fanefena ny tanora no fananganana ny hoavin'ny firenena. Ny toerana mora hita indrindra amin'izany fanefena ny tanora sy fampijoroana hatrany ny firenena izany anefa dia tsy aiza fa any an-tsekoly indrindra. Mora miray ny firenena rehefa politika fampianarana sy fanabeazana maharitra iray maharaka andro no ampiharina amin'ny sekoly rehetra ao amin'io firenena io.
Manao ahoana tokoa moa izany firenena frantsay izany? Na dia samihafa fiaviana aza ny olona ao aminy, misy ny teratany tao, misy ny taranaka mpiavy faharoa na fahatelo na mihoatra, misy ny avy amin'ny zaratany frantsay hafa mba tsy ilazana hoe mbola zanatany frantsay, misy ireo mpitsoa-ponenana avy amin'ny kaontinanta hafa sady tsy nozanahan'ny frantsay fa ireo rehetra ireo no mandrafitra ny maha firenena frantsay azy.
Firenena lahika anefa ny firenena frantsay, ka tsy ho ny fivavahana na finoana velively no hampiray azy ara-kolontsaina fa avy amin'ny fampianarana ny ankizy sy ny tanora. Na manana ny lohany sy ny eritreriny aza ireo mpitsoa-ponenana maro dia maro miditra ao aminy, na manana ny fivavahany sy ny kolontsaina tiany mbola hotohizana any amin'ny firenena vaovao onenany aza ireo ray aman-dreny ireo, rehefa mianatra any an-tsekoly ny zanany, dia mahazo antoka ny mpitondra frantsay fa hanana ilay kolontsaina sy fomba fisainana frantsay koa ireo zanaka mpiavy ireo.
Nanana ny fahombiazany ilay rafi-pampianarana tany amin'ny faramparan'ny taonjato faha-20 tany ho any, rehefa tafiditra tsara tao an-tsain'ireo zanaka ireo fa tena Frantsay tanteraka ry zareo na dia tsy teratany tao aza ny razambeny. Tsy vao tamin'izao fotoana izao ihany no nalaza izany fampihorohoroana izany fa efa nisy koa tamin'ny fotoana nandresen'ny FIS (Front Islamique du Salut) tany Alzeria kanefa naongan'ny miaramila tao sy noravany tanteraka ilay antoko matanjaka. Tsy mora anefa ny famoretana ilay antoko natanjaka vao nahazo fahefana, fa nanana rantsana hatrany Frantsa. Nisy fanapoahana baomba tao Frantsa saingy tankina tanteraka izany avy eo satria nanana fahatsapan-tena ho Frantsay kokoa ireo tanora nifanakaiky tamin'ilay vondrona lasa mampihorohoro ary firenena efa anankinany ny hoaviny rahateo.
Mandraka ankehitriny rehefa ny mpianatra no nianatra amin'ny lisea frantsay, dia manana ny fahatsapana maha-frantsay azy, na farafaharatsiny akaikin'ny fony ny kolontsaina frantsay, akaikin'ny fony kokoa i Frantsa na dia azo heverina ho tsy manadino ny tanindrazany aza izy. Matetika anefa ny olona mivoaka avy amin'ireny lasitra ireny ihany no lasa sangany ao amin'ilay firenena, na mahazo ny toerana ambony, mpanapaka ara-politika ao amin'ny firenena niaviany, ka tsiverimandeha izy na ho any Frantsa na ho ao an-tanindrazany, indrindra fa hoe zanatany frantsay taloha izay firenena niaviany izay. Ny fanontaniana miselontselona ao an-tsaina kosa rehefa mieritreritra izay toe-javatra izay dia hoe politika manao ahoana no ho ampihariny ary fandresen-dahatra avy amin'iza no hanandanja kokoa eo aminy rehefa lasa mpanapaka tokoa izy? Eritreritra fotsiny ihany ireo rehetra ireo fa tsy voatery hoe ireo no marina.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Manaraka»